Isaphulelo sekhomishini ye-Binance - Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Isaphulelo kumali ye-Binance
Tag: Binance, Ukudluliselwa kweBinance, I-ID yokudluliselwa kweBinance, Ikhodi yokudluliselwa kweBinance, Ikhodi yokudluliselwa
Ukuhweba ngakunye, ukusebenza ngakunye kwezezimali okwenziwa eBinance, okuyi-Exchange enkulu kunazo zonke emhlabeni namuhla, kunezindleko, ikhomishini, Imali. Uma ungakabhaliseli kule Exchange ungakwenza ngekhodi lami lokudlulisela https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (i-id yokudlulisela: EV6X8DW5) futhi uzoba namakhomishini anesaphulelo sama-20% ngokushesha, kuze kube phakade. Kungani kungenjalo?
IBinance ibiyiphedi yokwethula kimi, ikakhulukazi ukuthola ifayela le- I-Binance Smart Chain kanye ne-DeFi dapps yayo. Uma umama wami efunda lo musho ubengathi: "Uyadlala ngami?". Uma uzibuza futhi, landela isixhumanisi esingenhla ngokuluhlaza ukuqonda ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani.
Uma uthanda i-Crypto uyazi ukuthi wonke umuntu okhuluma ngayo uthi: Angiyena umeluleki wezezimali! Isexwayiso! Ngakho-ke ngisho lokhu kuwe, futhi uqaphele: Angiyena umeluleki wezezimali. Anginiki izeluleko zokuthi ungayitshala kanjani imali yakho, angikuthembisi ukuzimela kwakho kwezomnotho noma uLambo emgodini wemoto. Ukutshala imali kuhlala kufaka izingozi, futhi udinga ukuzibona ngokugcwele.
Isihloko sangaphambiliniI-Binance Coin (BNB): Ithokheni lendabuko lokushintshaniswa okukhulu kakhulu kwe-crypto emhlabeni
Isihloko esilandelayoI-Binance: Ukudluliswa kwamakhredithi ngokushesha nge-SEPA wire transfer
Kwenziwa kanjani Ukuhweba Kwemajini (nge-LEVA) ku-Binance?